Fotoana fikatonan’ny jono: mihinana poizina ny « sardinels » | NewsMada
Fotoana fikatonan’ny jono: mihinana poizina ny « sardinels »
Nambara tamin’ny fomba ofisialy tany Toliara fa mikatona ny fanjonoana karazan-trondro « sardinels » any Atsimo Andrefana, manomboka ny 1 novambra ka hatramin’ny 30 avrily 2019. Notsindrin’ny minisitra, Andriamananoro Augustin, ny maha zava-dehibe ny fanajana io fotoana fikatonan’ny jono io. Mandritra izany vanim-potoana izany, mitombo ny « algues » misy poizina hohanin’ireny trondro ireny ka hifindran’izany poizina izany izay mihinana azy.
Mampahafantatra ireo mpanjono ny minisitera amin’ny loza mety hitranga noho ny fihinanana ireny « sardinels » ireny amin’izao vanim-potoana mafana izao. Nandritra ny fihaonana tamin’ireo fikambanan’ny mpanjono, notoloran’ny minisitera sambo 14 namboarina amin’ny « fibre de verre » (7 m ny halavany ; 70 cm ny sakany ; 80 cm ny haavony) ny fikambanan’ny mpanjono, naparitaka any Toliara. Manatsara ny vokatra ho azon’ny mpanjono ny fananana ireo sambo ireo, nisaoran’ny filohan’ny fikambanana, i Dadany, ny minisitra amin’izao fanampiana ny mpanjono izao.
Nilaza ny faniriany hametraka toerana fampangatsiahana fitahirizam-bokatra isaky ny toby misy mpanjono ny minisitra sy hampiditra rano madio fisotro. Tanjona ny hikajiana ny kalitaon’ireo vokatra azo, hanaraka ny fenitra ho fitandroana fahasalamana, takin’ireo mpandraharaha sy ny mpanjifa. Nankatoavin’ny mpanjono ny nataon’ny minisitera satria voalohany teo amin’ny tantara ny nisy minisitra nitarika hanakatonana ny jono any Atsimo Andrefana.